Jose Mourinho iyo Jurgen Klopp wax khilaaf ah kuma jiro
Jose Mourinho ayaa haatan hogaaminaya tartanka loogu jiro shaqada tababaraha premier League kadib markii laga caydhiyay kooxda Tottenham.
Spurs ayaa laga badiyay shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu danbeysay ee horyaalka, iyo sidoo kale kulankii FA Cup ee ay la ciyaareen Everton markii cadaadiska la saaray Mourinho.
Waxaa 2-1 uga badisay kooxda London ka dhisan ee West Ham axadii. Guuldaradan ayaa sabab u noqotay in Mourinho uu kor u kaco hogaanka kooxda tababarka isaga oo ku sii jeeda in ay shaqada ka eryaan kooxaha premier League.
Kahor dhamaadka sanadkii hore, Tottenham ayaa u muuqatay mid loolan ugu jirta hanashada horyaalka kadib markii ay la kulantay hoos u dhac ku yimid kaalinta sagaalaad waxayna xitaa halis u tahay inay seegto isreebreebka Europa League, iskaba daa Champions League.
Laakiin waxay gaareen finalka Carabao Cup oo ay la ciyaarayaan Man City 25kii Abriil waxayna ku guuleysteen 4-1 wareega koowaad ee finalka Europa League 32 ee ay la ciyaareen kooxda reer Austria Wolfsberger.
Mourinho ayaa haatan hogaaminaya shaqada laga ceyriyay Premier League, waxaana ka horeeya tababaraha Crystal Palace Roy Hodgson iyo tababaraha Newcastle Steve Bruce.
Liiska waxaa ugu hooseeya tababaraha Liverpool Jurgen Klopp, kaasoo aan difaacan horyaalkiisa xilli ciyaareedkan, waxaana laga badiyay kulankiisii ​​afaraad ee gurigiisa oo isku xigta.
Jurgen Klopp waxaa shaqada ka cayrin doona tababaraha Premier League Jose Mourinho.
Muxuu dalbaday Ole Gunnar Solskjær?
Reducing weight is just not an identical as shedding fats, medical doctors